काठमाडाैं । आजको दिनमा विश्वका हरेक देशहरुमा नेपालीहरुको परिश्र’मलाई कसैंले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । स्वदेशी माटोमा केही गर्ने सपना भएपनि क’मजोर आर्थिक हैसियत र अव्य’वस्थित वातावरण भएका का’रण नेपाली युवा पुस्ता लाखौं सपना बोकेर परदेशी हुन बाँ’ध्य हुन्छ । विदेशमा दुः’ख सुरुवातमा सबैं नेपालीहरुका लागि सामान्यजस्तैं हो । समय फेरिदैं गएपछि नेपालीहरुले पनि विदेशमा ठुलठुला […]
October 1, 2021 October 1, 2021 N88LeaveaComment on एमाले महाधिवेशनमा यस्तो छ खानाको परिकार, चाैरासी व्यञ्जन
नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिका लागि तीन दिनसम्म कार्यक्रमस्थलमै खाना र खाजाको व्यवस्था गरिएको छ । टेण्डरमार्फत खाना र खाजाको व्यवस्था गरेको एमालेले करिब ६ हजार प्रतिनिधिका लागि पहिलो दिनको खानामा दाल भात, अचार तरकारीसहित कुखुरा र खसीको मासुका व्यञ्जन समेटेको छ । सलादमा मुला,गाँजर, काँक्रो, लगायत राखिएको छ भने भात नखानेलाई रोटीको व्यवस्था […]
October 1, 2021 N88LeaveaComment on काठमाडौंमा करोडौंको घर हुने घरधनी पनि १० हजार सरकारी अनुदान लिन लाइनमा तँछाड मछाड गर्दै !
काठमाडौं । शहरमा करोडौँ पर्ने चारतले घर छ । कोठा भाडामा लगाएर महिनामै दशौँ हजार बुझ्छन् । यिनै सहरियालाई छतमा तरकारी फलाउन भनेर बागमती सरकारले कौसीखेतीका नाममा १० हजार अनुदान बाँडिरहेको छ । र, घरधनीहरु पनि अनुदान हात पार्न लाइन लाग्ने गरेका छन् । जब कि तरकारी खेतीबाटै परिवार पाल्ने सहरी क्षेत्र आपिासका वास्तविक किसान […]
काठमाडौँ । एमालेमा लागेका पूर्वमाओवादी नेताहरु पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । केही नेताहरु ओलीसँग विलय भएका छन् भने केही नेताहरु भने एमालेसँग नै अन्तरसंघर्ष गर्ने तयारीमा देखिएका छन् । यतिबेला माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका लेखराज भट्ट र रामबहादुर थापा बादल पूर्णरुपमा नै एमालेमा लागेका छन् तर प्रभु शाह, मणि […]
October 1, 2021 October 1, 2021 N88LeaveaComment on ओलीले खोसिदिए बादलको पद , कसलाई दिए ?
भाषण गर्दागर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई के भयाे एक्कासी, हजाराैँ नेता कार्यकर्ता स्तब्ध ?
October 1, 2021 N88LeaveaComment on भाषण गर्दागर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई के भयाे एक्कासी, हजाराैँ नेता कार्यकर्ता स्तब्ध ?
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन उद्घाटन गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएपछि सम्बोधन भाषण पूरा गर्न सकेनन् । आफ्नो स्वास्थ्यका कारण उनले भाषण पूरा गर्न सकेनन् । आफूलाई रुघाखोकी लागेर सम्बोधनकै क्रममा असजिलो महसुस गरेपछि उनले नेता शंकर पोखरेललाई आफ्नो लिखित भाषण पढ्ने जिम्मा दिए । त्यसपछि उनी आफ्नो आसनमा गएर बसे भने […]
October 1, 2021 N88LeaveaComment on सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प
काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चोकको जेथाल केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार दिउँसो १२ : ५४ बजे जेथाल केन्द्रबिन्दु भएर ४.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो । उक्त भूकम्प गोरखा भूकम्पको परकम्प भएको सो केन्द्रले जनाएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछि हालसम्म नेपालमा ४ रेक्टर […]
बागलुङमा सिंगो गाउँ एमालेमा प्रवेश
October 1, 2021 N88LeaveaComment on बागलुङमा सिंगो गाउँ एमालेमा प्रवेश
बागलुङ । ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ३ घोसाखानीको सिंगो गाउँ एमालेमा प्रवेश गरेको छ । नेकपा एमाले ढोरपाटन नगरपालिकाले मंगलबार बुर्तिबाङ बजारको दरवार होटेलमा पार्टि प्रवेश कार्यक्रम आयोजना गरेर उनीहरुलाई एमालेमा भित्र्याएको हो । ढोरपाटन… ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ३ घोसाखानीको सिंगो गाउँ एमालेमा प्रवेश गरेको छ । नेकपा एमाले ढोरपाटन नगरपालिकाले मंगलबार बुर्तिबाङ बजारको दरवार […]
नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताले एम्बुलेन्स तोडफोड गरे
October 1, 2021 N88LeaveaComment on नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताले एम्बुलेन्स तोडफोड गरे
बाजुरा । नेपाली कांग्रेस बाजुराका कार्यकर्ताले नेपाल रेडक्रस सोसाईटी बाजुराको एम्बुलेन्स तोडफोड गरेका छन् । कांग्रेस बाजुराको जिल्ला अधिवेशनमा प्रदेश (ख) मा निर्वाचनको मतगणना स्थल बनाएको बडिमालिका नगरपालिकाको गेटभित्र राखिएको एम्बुलेन्समाथि तोडफोड भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ताले एम्बुलेन्सको अगाडिको सीसा फुटाइदिएका हुन् । घटना बिहीबार राति भएको हो । एम्बुलेन्स भारतीय […]
कसैले नसोचेको अकुत सम्पति देउवा पत्नी आरजु म्याडमको नाममा, छानबिन शुरु !
October 1, 2021 N88LeaveaComment on कसैले नसोचेको अकुत सम्पति देउवा पत्नी आरजु म्याडमको नाममा, छानबिन शुरु !
काठमाडाैं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी तथा पूर्व सांसद आरजु राणा देउवाको नाममा स्रोत नखुलेको करिब दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति फेला परेको छ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै राणाविरुद्ध उजूरी परेपछि छानविनको क्रममा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले करिब २ अर्ब बराबरको सम्पत्ति फेला पारेको बताइएको छ । विभिन्न व्यवसाय, आइएनजिओ र एनजिओमार्फत गैरकानूनी सम्पत्ति […]